Iingcebiso ezili-12 ezinokukunceda ukubetha iBlodwe yoMculi
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Iinkqubo
Indlela yokubetha uMculi weBlock
by UDkt. Janet Montgomery
Iingcebiso zokufumana ukuphefumlelwa kwakho xa ufumana ubunzima bebhloko.
Into ephazamisayo kumculi ukuba bazive belahlekelwe ukuphefumlelwa, ukuba bahlangabezane nebhokisi lokudala. Kodwa ukubandezeleka kwinqanaba lomculi akuthethi ukuba ulahlekelwe ngamandla akho obugcisa kwaye unokutshatyalaliswa. UDkt. Janet Montgomery unamacebiso okuncedisa ukubetha ibhloko lomculi:
Ukubetha Umculi we-Block Tip 1
Ukwesaba ukungakwazi ukwenza oko kukukwenza uzive ulahlekelwe ngumphefumlo wakho.
Ukuze ususe uloyiko, kufuneka usondele kwipayili yakho ngokungathi ngumsebenzi kwaye YENZA.
Ukubetha Umculi weBlock Tip 2
Zibophezele ukubeka iinjongo ze 'X' yenani leemizobo. Kopisha ukuba kufuneka usebenzise amathuluzi ekhitshini njengemizekelo ukuba kufuneka, kodwa ukufika nje kwipeniti ngokwayo kuya kuqala ukukukhuthaza, nokuba awuyithandi loo mbandela. Kuhlala kukho into yokufunda.
Ukubetha uMculi weBlock Tip 3
Tshintsha abezindaba. Ukuba i- acrylic , iya kwioli. Ukuba ioli , iya kuprintmaking .
Ukubetha uMculi weBlock Tip 4
Khangela abaphandi abatsha kwiwebhu, usebenzisa ukukhangela kwe-Google umfanekiso. Yiya kwiigalari. Zama ukufumana umculi owenza into ebhenkisayo kuwe, into ethi ilizwi ngaphakathi kwakho lithi, "Ndiyakwenza oko" okanye "Ndingathanda ukwenza oko." Khusela umfanekiso kwaye uyikopishe ukuze ufumene ukuba lo mculi wenza ntoni kwaye njani. Emva koko cinga ngokuphindaphinda iingcamango.
Ukubetha Umculi weBlock Tip 5
Dlala "ntoni na?" umdlalo. Kuthekani ukuba ndayifaka le ngongoma yesifundo esidala kwivili?
Kuthekani ukuba ndidibanisa ubomi obuthile bezitena? Ndingayisebenzisa njani into entsha, umxholo omtsha, isitayela esitsha? Yiba yintsimi kwiingqalelo zakho.
Ukubetha uMculi weBlock Tip 6
Khumbula ukuba wonke umntu unamaxesha angenayo. Andiboni ukuba bawalandela ngokwenene, nje u-subconscious uthatha i-breather kwaye ulungele ukuthatha ulwahlulo oluhlukile.
Ukubetha uMculi weBlock Tip 7
Khangela ezinye iincwadi ekucingeni ukudala ukunika i-jolt.
Ukubetha Umculi weBlock Tip 8
Thatha uhambo ukuya kwindawo ethile ongayize uyicinge ngayo, nokuba ngaba kuphela edorobheni lendawo awuzange uhlolisise. Njalo thabatha i-sketchbook, kuyo yonke indawo oya kuyo. Okanye ikhamera yedijithali. Khawucinge nje ngeLilliput okanye i-giant ukutshintsha indlela ojonga ngayo.
Ukubetha Umculi weBlock Tip 9
Gcina ingxelo yeemidwebo kunye nemibhalo yenyanga. Khetha into evela kwiphephancwadi ukupenda. Hlola kwakhona kwiinyanga ezintandathu okanye ngonyaka.
Ukubetha Umculi weBlock Tip 10
Qulunqa i-scrapbook yeefowuni zentsapho - kungekhona nje ubuso, kodwa ilungu ngalinye lentsapho lenza into efana nayo - isicatshulwa 'somgca' ngokubhala malunga nomntu, ixesha, iimpawu zakho. Gcina kwiphephancwadi kwiintsana zakho zezingane.
Ukubetha Umculi weBlock Tip 11
Yiya kwiziko eliphezulu labahlali kwaye udwebe abantu apho. Thetha kubo ngamabali abo obomi. Zama ukuvakalisa impendulo yakho kwimidixo edibeneyo usebenzisa ikopi zeefoto zabo zakudala, njl.
Ukubetha Umculi weBlock Tip 12
Thatha iklasi efuna ukuba uvelise kwindawo ehleliweyo.
Imibala Eyisiseko ukuQala ukuPenda ngeAcrylic
Iintlobo zokuGaya iiOyile ezisetyenziswe kwiPainting yeoli
Ndingayenza njani i-Deckle Edge kwiPhepha le-Watercolor?
Iipalette kunye nezobugcisa bePre-Raphaelite Painters
Indlela yokulungisa iindwangu kwiPraint yesikhumba
Indlela yokufihla iimpazamo kwi-Acrylic okanye i-Painting Oil
Iindlela eziSiseko zoPastile
Yintoni efana nokusebenzisa i-Watercolor Canvas?
I-Art Symbols Dictionary: Ukufa
Indlela Yokwenza Iidololi Zakho Zamafutha Zakho
Umthandazo kuMzalwana Wakho
Iimifanekiso eziphezulu ze-Halloween zezingane
Indlela Yokuhlabelela Ngezinto ezili-10
UBarack Obama kunye namaSilamsi
Inkolelo-ngqungquthela: Abakholelwa kuThixo abanaso Isizathu sokuziphatha
I-Biography yeWilbur Wright, uPioneer Aviation
Phindaphinda, i-Strike-Slip, Oblique, kunye neeNkohlakalo eziqhelekileyo
Ingoma yesiJamani yabantwana "Gruen sind alle meine Kleider"
I-Virtual View View - Indlela yokufaka - I-Delphi ye-3 ye-Party ye-Open Source Component
IsiNgesi malunga neenjongo zezoNyango - I-Paint Pain
I-Steroids - Izakhiwo zeMolcular
I-Haiku ifuna ukuqhubelela iLifa eliMnye kwiiLine ezintathu
Isikhokelo soMgaqo-nkqubo wokuSingatha (BIPs)
IBhodiPusher Custom Skateboard Decks
Iingqungquthela - Ii-Worksheets zeeHopophone